Aqoonsiga Sweden ee Falastiin oo dhaliyay ficil-celino adag - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Aqoonsiga Sweden ee Falastiin oo dhaliyay ficil-celino adag
Fal celino ka dhashay ictiraafka Falastiin
La daabacay fredag 31 oktober 2014 kl 10.22
Ictiraafka ay Sweden u fidisay Falastiin in ay u aqoonsato waddan madax-banaan ayaa dhaliyay dareeno adag. Israel ayaa u yeedhay safiirkeedii u fadhiyay Sweden ka dib markii Sweden si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay aqoonsatay Falastiin
Haddaba wasiiradda arrimaha dibada Margot Wallström ayaa iyadu sheegtay in ay filayeen in arrintani ay noqon doonto mid dood dhalisa, waxayna ku dooday in arrinkani uu ahaanayo mid la isku khilaafsan yahay.
Middani waxay ahaanaysaa mid la isku khilaafsan yahay weligeed, waa taariikh dheer oo kicinaysa dareeno adag. Waxaase muhiim ah in la xuso in aanaan dhinacna raacin, ee aanu qorshaha nabbada taageernay, sidaa ayay leedahay wasiiradda arrimaha dibada Sweden
Si kastaba ha ahaate Israel ayaa u yeedhay safiirkeedii u fadhiyay Sweden, taas oo cadaynaysa in Israel ay u aragto in Sweden ay tageertay dhinac, labada dhinac ee khilaafku ka dhaxeeyo. Balse sida ay sheegayso Margot Wallström arrintan ayaa ah mid ay filayeen
-Arrinkan qadarintiisa ayaanu u haynaa, ma rabo in aan ka bad badiyo ama aanan carabka ku dhufan. Waa in la isticmaalo hab diblumaasiyadeed. Weli waxaan aaminsanahay in aanu sii wadi karo xidhiidhka wanaagsan ee naga dhaxeeya Israel marka arrintan habaaskeedu meesha ka baxo, ayay leedahay Margot Wallström, wasiiradda arrimaha dibadda Sweden.
Geesta kale, wasiirka arrimaha dibadda Falastiin ayaa soo dhaweeyay ictiraafka ay ka heleen Sweden
-Waxaa rabaa in aan uga mahadceliyo, dawlada Sweden iyo shacabka Sweden aqoonsiga iyo geesinimada ay muujiyeen iyadoo ay jireen cadaadis badan ilaa iyo markii ay shaaciyeen ujeedadooda la xidhiidha ictiraafka Falastiin.